HIM | Health in Myanmar » အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ – နောက်ဆက်တွဲ (၂)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar176 comments
Saine mg says:
ဆရာ ခင်​ ဗျာ ကျွန်​​တော့်​ မိန်းမနဲ့ ကျွန်​​တော်​ လိင်​ဆက်​ဆံပါတယ်​ အခု ရာသီမလာ ပါဘူး ရာသီမလာတာ ၁၀ ရက်​​လောက်​​ကျော်​​နေပါပြီ လာမဲ့ ရက်​ထက်​ ကျွန်​​တော်​တို့ စီးပွား​ရေး မ​ပြေလဲလို့ က​လေး မလို ချင်​​သေးလို့ ၁၀ ​ကျေ်​​လောက်​ ရှိ​နေပါပြီ မလာပါကျွန်​​တော်​တို့ကို ကူညီပါအုံး ဆရာ ဘယ်​လို ဖျက်​ချရမလဲ ဆိုတာ ​ကျေးဇူးအများကြီးတင်​ပါတယ်​ ဆရာ ဆရာ ကို အားကိုးပါတယ်​ အမြန်​​လေး ​ဖြေကြား​ပေ​စေချင်​ပါတယ်​ ဆရာ ceriousboy@gmail.com
က​လေးဖျက်​​ပေးတဲ့​နေရာကို သိရင်​ လိပ်​စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်​​လေး​ပြော​ပေးကြပါ။ ရန်​ကုန်​ကပါ။ ကူညီ​ပေးကြပါအုံး။
ရန်​ကုန်​ကပါ။ က​လေးဖျက်​​ပေးတဲ့​နေရာကိုသိချင်​လို့ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​သိပါရ​စေ။ အတတ်​နိုင်​ဆုံးမြန်​မြန်​​လေး​ဖြေ​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​။ ​ကျေးဇူးအရမ်းတင်​ပါတယ်​။
My sperm is coming out quickly when sex.
And my penis is short.
How can I do to big for my girl?
ဆရာ ကျွန်​​တော်​ အသက်​၂၀ ရှိပါပြီ ခုထိထိပ်​က ငုံ​နေတုန်းပါပဲ ဘယ်​လိုအန္တရာယ်​ရှိနိုင်​လဲ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ​....?
U Kyaw Linn says:
ဆရာ ကျွန်​​တော့်​ဗကာင်​မ​လေးက်ု ECee2၁၀ ကဒ်​ထက်​မနည်းတိုက်​ခဲ့ဘူးပါတယ်​။ဒါ​ပေမယ့်​ တစ်​ခါမှ သုတ်​မလွှတ်​ဘူးပါဘူး။အဲဒါ က​လေးမရမှာ စိုးရိမ်​လို့ပါ။။
ကိုယ်​ဝန်​ဖျက်​ချရန်​သင့်​​တော်​​သော​နေရာ ညွှန်​ကြား​ပေးပါဆရာ ​နေရာက မန္တ​လေးကပါ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​
Bro ပြသနာ ​ဖြေရှင်းလို့ ပြီးသွားပြီလား
ကိုယ်​ဝန်​က ခုမှ 1 လ ​ကျော်​​ကျော်​​လောက်​ပဲရှိပါတယ်​ သူ့အသက်​က ၂၀ ပါ
​ဆရာမြန်​မြန်​ ​ဖြေကြား​ပေးပါ​နော်​။​သောက်​​ဆေးဆိုလည်း နာမည်​​လေး၊​ဆေးခန်း သွားရမယ်​ဆိုရင်​လည်း လိပ်​စာ​လေး​ပေးပါ​နော်​။
ဆရာခင်​ဗျား ကျွန်​​တော့်​​ကောင်​မ​လေးမှာ ကိုယ်​ဝန်​ရ​နေပါတယ်​ ဒါ​ပေမဲ့ ကျွန်​​တော်​တို့ခု က​လေးမလိုချင်​​သေးဘူး။က​လေးကို ဖျက်​ချချင်​တယ်​။ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ ခင်​ဗျား။​ပြောပြ​ပေးပါ​နော်​ highergradesoldier@gmail.com ပါ 09972317270
Ye Man Aung says:
ဆရာကျွန်​​တော့်​ ​ကျေးဇူးပြု၍​ပြောပြ​ပေးပါ အသက်​က၂၃ နှစ်​ရှိပါပြီPenis ထိပ်​ ကအခုထိ နာ​နေတုနးပဲထိ​တွေ့လို့မရဘူး ထိလိုက်​ရင်​ စပ်​တယ်​ ဆရာ ​တော်​​တော်​စပ်​တာ ပါ ငယ်​ငယ်​​လေးထဲက စပ်​တာ အခုထိပဲ ကိုယ့်​ကို ယ်​ကို ယုံကြည်​မှုမရှိဘူး ဖြစ်​​နေတယ်​ ဆရာ
ဆရာ ကျွန်​​တော်​က သုတ်​လွှတ်​တာအရမ်းမြန်​​နေလို့ပါ သူမပြီး​သေးခင်​ပြီးသွားတက်​ပါတယ်။ ဆရာ......ဆေးမထိုးရပဲ...
ဆရာ ကျွန်​​တော်​က သုတ်​လွှတ်​တာအရမ်းမြန်​​နေလို့ပါ သူမပြီး​သေးခင်​ပြီးသွားတက်​ပါတယ်​ အဲလိုကျ သူစိတ်​​ကျေနပ်​​အောင်​ကျွန်​​တော်​ဆက်​​နေမိပါတယ်​ အဲလိုကျ တခါတခါ လိင်​အင်္ဂါက ဆက်​ဆံ့ရင်းညိုးသွားတက်​ပါတယ်​ ဆရာ အကြံေ​လေးေ​ပေးေ​စေချင်​ပါတယ်​
ကျွန်​မ 12.10 မှာရာသီလာပါတယ်​. 18.10 ကျ​တော့ ချစ်​သူနဲ့အတူတူ​နေခဲ့မိပါတယ်​..သူ့Sperm​တော့ 1 ကြိမ်​ ထည့်​မိပါတယ်​..ခုရာသီလာရမည့်​ ရက်​ထက်​ 12 ရက်​​ကျော်​​နေပါပီ.. အရင်​ကလဲရာသီရက်​မမှန်​ခဲ့ပါဘူး..ခုလ sperm ၀င်​မိလိူ့ အရမ်းလန့်​​နေလို့ပါဆရာ... ​ကေသီပန်​ 3ထုပ်​ 2ရက်​ ဆက်​​သောက်​တာ 6ရက်​​လောက်​လဲ ​ကျော်​ ​နေပါပီ..ပီး​တော့ လိ်​င်​ဆက်​ဆံရင်​ တစ်​ခါမှမပီးသလို စိတ်​ထဲလဲ အ​ထွေအထူး မခံစားရပါဘူး ဆရာ... ဘာဖစ်​လို့ပါလဲ ??? ပီး​တော့ ကိုယ်​၀န်​ ရနိုင်​ပါသလား??? ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ဆရာ...
အခြားမဟုတ်​ပါဘူး ​သေးတာ ကြီး ၊ တိုတာရှည်​ အဲ့ဒါ​တွေကို
ဘယ်​လိုမျိုး ပြုပြင်​​ပြောင်းလဲ တာဆိုတာ အနည်းငယ်​ရှင်းပြ​ပေးပါ
​ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်​​တော့ကိုလဲ ကူညီပါဆရာ..
ကျွမ်​​တော့ ပစ္စည်းကအရမ်း​သေး​နေလို့ မိန်းမဖြစ်​သူကလဲ ငြူစူ ပါတယ်​..
ပြီး​တော့ ရှက်​လို့ မ​ပြောဖြစ်​တာလဲကြာပါပြီ...သူငယ်​ချင်း​တွေကို​မေးကြည့်​​တော့လဲ ​ဆေးထိုးမယ်​ဆို အဆင်​မ​ပြေနိုင်​မှာစိုးတာကတစ်​​ကြောင်း​ ​ကြောင့်​
မထိုးဖြစ်​ခဲ့ပါဘူးဆရာ..အခု​တော့ မရ​တော့လို့ ​တောင်းဆိုလိုက်​ရချင်းဖြစ်​ပါတယ်​..ဆရာ အ​နေနဲ့ အပန်းမကြီးရင်​ ကူညီ​ပေး​စေလိုပါတယ်​..ဆရာ..​လေးစာလျှာက်​ပါ....ဆရာ..
ဆရာ လိင်အင်္ဂါ ကြီးထွားချင်ပါတယ် နဲနဲလဲ ရှည်ချင်ပါတယ် နည်းလမ်းကောင်းလေးများရှိရင် ညွှန်ကြားပေးပါ ဆရာ
အသက်၂၃ပါ လိင်‌ကသာမန်‌ထက်‌ငယ်‌‌နေပါတယ်‌ နည်းလမ်း‌လေးတစိတ်‌‌လောက်‌‌ဖြေကြား‌ပေးပါ
ဆရာခင်ဗျာ ကျတော်အိမ်ထောင်ကျတာ၂လပဲရှိပါသေးတယ်။မိန်းမနှင့်အတူနေရင်း ပန်းညိုးသွားချင်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။သုတ်လွတ်မြန်လို့ မိန်းမပြီးအောင်ထိန်းနေရင်မှာလည်း ပန်းညိုးသွားချင်သလိုဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါလိင်စိတ်ရှိလို့ပန်းပေါ်နေရင်းမှာပဲညိုးသွားတတ်ပါတယ်။ပြန်လို့ကြိုးရင်လည်း ခနလေးပြန်ပေါ်ပြီးပြန်ညိုးသွားပါတယ်။ကျတော်ျမှာပန်းသေရောဂါဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေရပါတယ်။ .....ဆရာဝန်နဲ့ပြရအောင်ထိများအခြေအနေဆိုးရိမ်ရပါသလား။ ......မိန်းမနဲ့တစ်နေ့တစ်ကြိမ်နေလို့များဖြစ်တာပါလား။ ..... မိန်းမနှင့်အတူနေတာကို ရှောင်ရပါမလား။ ....ပန်းညိုးဒါ သုတ်အားနည်းတာနပ်ဆိုင်ပါသလား။နည်းလမ်းကောင်းများရှိရင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဆေးသောက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ဆေးကိုညွှန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျတော် gmailလိပ်စာထည်းမှာ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။အားကိုးစွာဖြင့်
ဆရာ hiv ကူဆက်ခံရပြီး ဘယ်နှစ်လလောက်နေရင်သွေးစစ်တာပေါလည်းရင် ကျွန်တော်ကိုဖြေပေးပါနော်
ရှည်​ဖို့အတွက်​ ​နေ့တိုင်းခပ်​နာနာ​လေးဆွဲ​ပေး။ ကြီးဖို့က တူနဲ့ထု။မကြာခင်​​ယောင်​ပြီးကြီးလာလိမ့်​မယ်​။
ဆရာမေးစရာလေးတစ်ခုလောက် ရှိလို့ပါ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါနော်ဆရာ။ကျွန်တော်အသက် ၁၉ပြည့်ပါပြီ။အခုထိ အဂါင်္ထိပ်ပိုင်း က မပြုတ်သေးပါဘူး တစ်ခုခုနဲ့ ပေါ်နေတဲ့နေရာကိုထိမိရင် ကျင် ပါတယိဆရာအဲ့ဒါဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆရာ။ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေ ပေးပါဆရာ။နောက်ပိုင်းကော ပြုတ်နိုင်ပါ့မလားဆရာ။
ဒါ​ပေမယ့်​ စိတ်​ကို ပြန်​ထိန်းမိတဲ့အချိန်​ သူ့အပျို​မြှေး​တော့​ပေါက်​ပါပီ။
ဒါ​ပေမယ့်​ စိတ်​ချရ​အောငိ ecee2တတိုက်​ထားပါတယ်​။ ကိုယ်​၀န်​ရမ၇ ​ဖြေ​ပေးပါဆရာ။
ဆရာခင်ဗျား ပါးစပ်ထဲ သုတ်ရည်စွန့်ရင်ကိုယ်ဝန်ရပါသလားသိချင်ပါတယ် မေးလ်ထဲပဲ ပြန်ဖြေပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျနော်လဲမေးခြင်ပါတယ်ယယယယကျနော့် အသက်၄၃ရှိနေပြီအခုဆိုကျနော့ ဒုးတွေပေါင်တွေအဆစ်တွေအရမ်းကိုက်ပြီးညောင်းညာနေပါတယ်နော်ပြီးအလပ်ကစက်ချုပ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်အမေရိကားမှာပါဖိနပ်စီးထားတယ်လုပ်ရင်းနဲ့ နေ့ တိုင်းလိုလိုခြေဖ၀ါးတွေကအရမ်းကြိမ်းပြီးအပ်နဲ့ စွနေသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်...နောက်ပြီးတော့ လိင်တံလဲပျော့ နေပြီးမလာဘုးဖြစ်နေတယ်ကျနော်ကတော့ စိတ်ကအရမ်းရှိနေတယ်အဲဒါဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲဆရာအကြောင်းလေးတော့ အမြန်ပြန်ပေးပါဆရာ
​Aung Than says:
အင်္ဂါ တို​နေလိုပါ ရှည်​​အောင်​ဘယ်​လိုလုပ်​ရမှာလဲ
ပီးတော့ ecee2 တိုက်ထားပါတယ်
၃ရက်လောက်နေတော့ သူအနည်းငယ် ထပ်လာနေပါတယ်
သူမှာ ကိုယ်ဝန် ရှိမရှိကိုကော ဘယ်လိုစစ်လို့ရနိုင်ပါမလဲ ဆရာ အကြံပေးပါအုံးနော်
ကျွန်တော် မ မြင်တိုင်းထ တယ် ကူညီပါဆ၇ာ ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ
crying rain says:
ဆရာ မိန်းကလေးတယောက်(အပျို) boyတယောက်နဲ့ ဆက်ဆံခဲ့တယ် နောက် အဖော်မပါဘဲ ကျွန်တော်နဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ ရင် HIV ကူးနိုင်သလား ဆရာ ပြီးတော့ သုတ်လျွှတ်မြန်တာ ဘယ်လိုထိန်းရမလဲ
ဖြေကြားပေးပါ နော် ဆရာ
တိုတိုလည်းတိုပါတယ်​ ဒါ​ကြောင့်​ကျွန်​​တော်​ ပုံမှန်​အ​နေအထားတစ်​ ခုဖြစ်​ချင်​ပါတယ်​ ထွားချင်​တာပါ
သူငယ်​ချင်း​တွေ မိတ်​​ဆွေ​တွေ​ပြောတာ​တော့ ​ဆေးထိုး​ပေါ့
ဘယ်​လို​ပြောရမလဲ ဆို​တော ထိုးလည်းထိုးချင်​တယ်​ ​ဘေးထွက်​ဆိုးကျိုး​ကို​ကြောက်​တယ်​
လက်မှာ သုတ်ရည် ပေကျံလို့အမျိုးသမီး အင်္ဂါထဲ လက်ထိုးမိရင် ကိုယ်ဝန် ရစေနိုင်ပါသလား
ကျွန်တော် ကသုပ်လွှတ် အရမ်းမြန်နေတယ်ဘာလုပ်ရမလဲအရာ
အမျိုးသမီးတွေ orgasm ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာ..
ပြီးတော့ ထွက်တဲ့ အရည်က သုတ်လို ချွဲပြစ်ပြစ် လားဆိုတာ
လဲ သိချင်ပါတယ်...ခင်ဗျာ 🙂
ကျွန်မ အသက် ၂၈ ပါ ဆရာ အမျိုးသားက နေတဆင့် HIV ကူးခံထားရပါတယ် ကျွန်မ သိချင် တာက HIV ဆေးကို မ သောက်ပဲ
နေ ရင် ကျွန်မ နေရမယ့် သက်တမ်းက ဘယ်လောက် ကြာနိုင် မလဲ
ဆရာ HIV ဆေး သောက် ရင် ရော သက်တမ်း ဘယ်လောက် ကြာနေ နိုင် မလဲ ဆရာ သေခါနီးမှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် သေရမှာ တော့ ကြောက်ပါတယ် ဖြေ ပေးပါ ဆရာ
​ကေသီပန်​​တော့ တစ်​ရက်​ကို သုံးထုပ်​​သောက်​ပါတယ်​
သုံးရက်​ရှိပါပြီ ဗို​​က်​​အောင့်​တာက လွဲလျှင်​ဘာမှ မထူးခြား
​သေးလို့ပါ ​ကျေးဇူးပြု၍ အကြံ​ပေးပါ
​ကျေးဇူးပြု၍ ကိုယ်​ဝန်​ဖျက်​ချဖို့ နည်းလမ်း​မေးထားတာ ​ဖြေကြား​ပေးပါအုံးရှင်​
ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်.. ပေးထားတဲ့ အီးမေးလိပ်စာက ပို့မရခဲ့တာပါ... အီးမေးလိပ်စာ မှန်ကန်အောင်အောင် ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်.. ကိုယ်ဝန် ဖျက်မပေးပါ...
​ကျေးဇူးပြု၍ အကြံဥာဏ်​​ပေးပါ ဆရာ
himburmese@gmail.com ကို တိုက်ရိုက်မေးပို့နိုင်ပါတယ်.. အခု လက်ရှိ ထည့်ပေးထားတဲ့ ဂျီမေးလိပ်စာကို ပြန်ပို့တာ ပို့မရပါ..
salai khai soe says:
saya pl get me ph. thanks
thanks you saya
ဆရာခင်ဗျာ....ကျတော်ရိုသေးလေးစားစွာဖြင့် ..ကျတော်အသက်က ၂၇ နှစ်ပါ မိန့်မရှိပါတယ် သုတ်လွတ်ပြန်နေလိုပါ ပြီးတော့ ဆရာ2c 3c ဆိုတဲ့လိင်အင်္ဂါကြီးဆေးတွေသုံးရင်
ရေရှည်အဆင်ပြေပါ့မလားဆရာ......ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါ ဆရာ...
ကျွန်တော့်ကောင်မလေး အရင်လ ရာသီလာပြီး ၄ရက်မှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ အခုရာသီလာမယ့်ရက်ကို 7ရက်ကျော်နေပါ ပြီ။ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား။ ရာသီလာအောင်ဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦး။ အရင်က လတိုင်းရာသီမှန်ပါတယ်၊။ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ မလိုချင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်ဆေးခန်းမှာ ဇျက်လို့ရပါသလဲ။ အခုထိရာသီမလာသေးဘူး။ဘယ်မှာဖျက်လို့ရလဲ ကျေးဇူးပြုရ်ျ ဖြေကြားပေးပါ
တစ်​လကိုယ်​ဝန်​ကို ဘယ်​လို ဖျက်​ချရမလဲ အကြံပြု​ပေးပါဆရာ
ဆရာ ကျနော်ကျနော့်ကောင်မလေးနဲ.တူတူနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဆေးတွေဘာတွေလည်းမသုံးမိပါဘူး ပြီးတော့အပြင်မှာကျနော်ထုတ်(ပြီး)လိုက်ပါတယ်...
ခုကျနော့်ကောင်မလေး ရာသီမလာတာ ၈ရက်ရှိနေပါပြီ ပြီးတော့သူ.ရင်သားတွေ(အထူးသဖြင့်)နို.သီးခေါင်းကတော်တော်နာနေတယ်လို.ပြောပါတယ်...... အဲတာကိုယ်ဝန်များရှိနေမလားဟင်...ကျနော်ကတော့သူ.ကိုကေသီပန်သောက်ခိုင်းပါတယ် အဲတာဘယ်လိုများ effect ဖြစ်မလဲသိချင်ပါတယ်.... ကိုယ်ဝန်ရှိရင်လည်းဘယ်လို safe ဖြစ်အောင်ဖျက်ချရမလဲဘာဆေးသောက်ရမလဲဆိုတာ ၁ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦး အားကိုးပါတယ်ဆရာ.....
ကျွန်တော့်ကောင်မလေး အရင်လ ရာသီလာပြီး ၄ရက်မှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ အခုရာသီလာမယ့်ရက်ကို ၅ရက်ကျော်နေပါ ပြီ။ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား။ ရာသီလာအောင်ဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦး။ အရင်က လတိုင်းရာသီမှန်ပါတယ်၊။ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ မလိုချင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်ဆေးခန်းမှာ ဇျက်လို့ရပါသလဲ။ အခုထိရာသီမလာသေးဘူး။ဘယ်မှာဖျက်လို့ရလဲ ကျေးဇူးပြုရ်ျ ဖြေကြားပေးပါ
ဆရာ2c 3c ဆိုတဲ့လိင်အင်္ဂါကြီးဆေးတွေသုံးရင်
kyaw thu tun says:
ကျနော့ရောဂါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေပို့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော်အခု သိချင်တာက ကျနော်က မန်းတလေးမှာနေပါတယ်။ ဘယ်လိုဆရာဝန်မျိုးကိုဆက်သွယ်ရမလဲခင်ဗျာ။ ဟိုမေးဒီမေး မေးရမှာ ရှက်လို့ပါခင်ဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်လို့ရပါ့မလားခင်ဗျာ။ ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ ။ ဘယ်လိုဆရာဝန်တွေကိုဆက်သွယ်ရမလဲခင်ဗျ ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။
ကုသလိုရနိုင်ပါသလား ဘယ်လိုနေရာမှာ ကုလိုရနိုင်ပါမလဲ ကျေဇူးပြုပြီလမ်းညွန်ပေးပါ လိင်အဂါင်္ပြည်စညနာကိုပေါ့ ဆရာ
ဆရာ ကျတော်မှာအဂါင်္မှာ ပြည်တည်နာလိုလို နဲ နာနေပါတယ် အပျော် လိုက်စားပြီ ကတည်းက ဖြစ်သွားတာပါ ဘယ်လိုဆေးများသေက်လိုနရနိုင်မလဲ hivရှိနိုင်လားဆရာ အများပြေား သလို ဖာကျိုးတာများလား ဆေးနည်းလေးလမ်းညွန်ပေးပါ စေတနာ ထားလို ညွန်းပေးပါ နည်းနည်တော့ ကြာပါပြီ လိင်အဂါင်္မှာ ပြည်တည်တဲ အနာလိုလိုဖြစ်နျော တာ လမ်းညွန်ပေးပါ
လိင်တံကြီးပြီးရှည်ချင်ပါတယ် ဆေးမထိုးပဲ သောက်ဆေးလိမ်းဆေးရှိရင်ဖော်ပြပေးပါ ဆရာ ဗမာဆေးဆိုပိုအဆင်ပြေပါတယ်
အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တော့ curvature correction ဖြစ်အောင်ခွဲစိတ်တာ။
ကိရိယာတတ်ဆင်တာ၊ တွေလုပ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်လို့ရပါ့မလားခင်ဗျာ။ ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ ။ ဘယ်လိုဆရာဝန်တွေကိုဆက်သွယ်ရမလဲခင်ဗျ ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။
လိင်ဆက်ဆံရာတွင် ဇနီးသည်နှင့်အတူတူ ကလိုင်းမက် ရချင်လို့ ထိန်းတာအဆင်မပြေဘူး နည်းလမ်းရှိလားသိချင်ပါတယ်
လိင်​ကြီးချင်​တာ ​ဆေးမထိုးဘဲ လိမ်း​ဆေးနဲ့၇နိုင်​ပါ့မလားခင်​ဗျာ။
ဆရာ ကျနော်သုတ်လွတ်တာမြန်လို. ဘယ်လို.လုပ်ရမလဲ အကြံပြုပေးပါအုးံ
ဆက်ဆံ ချိန်ကြာ ချင် တယ် ဆရာ
လိမ်တံ မာချင်တယ် ကြီး ချင်တယ်
နည်းလမ်း ကောင်း လေး ပို့ပေးပါ
ကျေးဇူး တင်ပါာသည်
ဆရာ ကျွန်တော် လေးစာပါ ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးရှိလို.ပါ ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကို ဆရာဝန်ကသွေးအားနည်တော့2နစ်လောက်ကလေးမယူနဲ.လို.ပြောထားပါတယ် အေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ ဆရာ နောက်ပြီ ကျွန်တော်မိန်မ မှာဖြစ်နေတယ်ပြသနာ တစ်ခုရှိပါတယ် အေတာက သူဗိုက်ဘယ်ဖက်မှာ အလုံးရှည် တစ်လုံးရှိပါတယ် ကျွန်တော်ထင်တာတော့ မျိုးဥပွန်းရောင်တယ်လို.ထင်နေတယ် ဟုတ်ပါသလား အလုံးက ကြည်ဥ လုံးထက်ကြီးပါတယ် ကင်ဆာ များဖြစ်နေမလားလို.လဲစိတ်ပူမိတယ်ဆရာရယ် ခွဲရင်ကော်ရနိုင်ပါသလား ဆရာ ကျေဇူးပြုပြီ ဖြေပေးပါလို.တောင်းပန်ချင်ပါတယ် ဆရာ ကျေဇူးတင်ပါတယ်
သိချင်တာလေး တစ်ခုလောက် မေးမြန်းခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ် ။ကြင်သူနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်ဟာ သုတ်လွှတ်မြန်လွန်းတဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက်သာ ဆန္ဒပြီးမြောက်ပေမယ့် ကြင်သူအတွက်ကတော့ အားမလို အားမရပေါ့ခင်ဗျာ ။ လိုချင်တာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တစ်ချိန်တည်း
ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ပြီးမြောက်မှု့ပါ ခင်ဗျာ ။။ သုတ်လွှတ်မမြန်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ညွှန်ကြားပေးပါ ခင်ဗျာ
heim min aung says:
ဆရာ.. မျက်ကွင်းတွေမဲစေတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကိုရှင်းပြပေးပါဆရာ..
ဆရာရှင့် သမီးချစ်သူကလိင်တံတိုနေပါတယ် ရှည်နိုင်မယ့်နည်းရှိရင်သိချင်ပါတယ် သူနဲ့နေရတာပျော်ပေမယ့် တခုခုလိုအပ်နေသလိုဖြစ်နေလို့ပါ
ကျွန်မကို အိုဂျီက မျိုးဥကြွေဆေး ပေးပါတယ်။မျိုးဥကြွေမယ့် ရက်ကိုလည်း
တွက်ပေးပြီးအတူနေခိုင်းပါတယ်။Ovoulation kit နဲ့လည်းစစ်ပါတယ်။၂ ကြောင်းပေါ်တဲ့နေ့မှာအတူနေခဲ့ပါတယ်။
သိချင်တာက မျိုးဥကြွေဆေးသောက်လည်းထားတယ်၊ အဲဒီလိုလည်းစစ်ပြီးမှအတူနေခဲ့တဲ့အတွက် ဒီလမှာကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေများ ပါသလားဆရာ။
ကျွန်တော်အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်ပါ ... အတူနေပြီးရင်မိန်းမ အင်္ဂါကနေသုတ်ပြန်ထွက်တတ်ပါတယ်ဆရာ ... ကလေးလိုချင်နေတော့ အဲ့လိုပြန်ထွက်သွားရင်ကလေးမရလောက်တော့ဘူးထင်ပါတယ် .... သူ့အင်္ဂါကျယ်သွားလို့များလား .. ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သေးသွားလို့လား ... သံဃာစင်ဂမုန်း ဥဆိုတာလည်းလက်ဆောင်ရထားပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ပါ ... ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြလို့ပါဆရာ .. ဆေးနည်းသိချင်လို့ပါ ...ကျွန်တော့် အသက် ၂၈ ပါ မိန်းမက ၂၂ ပါ ဆရာ အိမ်ထောင်သက်က ၂ နှစ်ပါ. .. ကျွန်တော် စိတ်လည်းမထိန်းနိုင်တော့ဘူး ပြီးတာအရမ်းမြန်မြန်နေတယ် ... အလုပ်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးလို့ထင်တယ်
ဆရာ မိန်းမနဲ့​တွေ့ရင်​ မြန်​​နေလို့ ကြာတဲ့နည်းလမ်း​လေးသိချင်​လို့ပါဆ
ဆရာ နောက်တခုက ကျနော် ၀မ်းသွားတဲ့ အခါမှာ မဆင်တွေက မဲတာလိုလိုစိမ်းတာလိုလိုဖြစ်နေတာပါတယ်ဆရာ ...နစ်ရက်ရှိပါပီ ကျနော်အစာစားတဲ့ အခါ မဲစေစိမ်းစေမဲ့ အစားစာတွေမစားမိပါဘူးဆရာ...အသားဟင်းချက်စားတာပါဆရာ ...ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါအုံးဆရာ ဆေးတော့သောက်ပါတယ်..အာရုံကြောအားဆေးရယ်...ရိုးရိုးအာဆေးရယ်သောက်ပါတယ်ဆရာ...လေးရက်လောက်တော့ဆက်တိုက်သောက်နေပါတယ်ဆရာ...
ဆရာ ...ကျနော် လိင်တံထိပ်ပိုင်းမှာ အဖုသေးသေးလေးတွေ တော်တော်များများပေါက်နေပါတယ်..သုံးပတ်ကျော်ကျော်၇ှိပါပြီ... ဒါပေမယ့် နာခြင်းယားခြင်း မရှိပါဘူး...ဘာမှလဲမဖြစ်ဘူး ပြီးတော့ လိင်တံ ကနေပြီ အရည်ကြည်လေးတွေ မကြာခဏထွက်ထွက်နေပါတယ်ဆရာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်ဆရာ ရှင်းပြပေးပါအုံးဆရာ
ကျနော်နဲ့ကျနော့ဇနီးက အသက် ၃၇နှစ်ရှိပါပြီ ကျနော်တို့မှာသမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်
သမီးက အသက် နှစ်နှစ်ခွဲကျော်သွားပါပြီ ကျနော်တို့နောက်ကလေးထပ်ယူဖို့ကြိုးစားတာ
တစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီ OG တွေနဲ့ပြတာလဲစုံနေပါပြီ အခုထိတော့အကြောင်းမထူးသေးပါ
ဘူး အမျိုးသမီးကိုမျိုးဥကြွေတာစမ်းတဲ့ဆီးစစ်တံနဲ့လဲစမ်းသပ်ပြီး မျိုးဥကြွေနိုင်တဲ့ရက်မှာ
အတူနေပါတယ် အခုကျနော်ဖြစ်နေတာက အခြားရက်မှာကျတော် sex ကိစ္စစိတ်ပါပေမယ့်
အဲဒိလိုကိုယ်ဝန်ယူရမယ့်ရက်မျိုးဥကြွေတဲ့ရက်မှာ sexကိစ္စဖြစ်ဖို့အားမရှိသလိုပဲ နောက်ပြီး အဲဒိရက်မှာမှ စိတ်လဲသိပ်မပါသလိုဖြစ်နေပါတယ် ပြောရရင် sex ကိစ္စအတွက် စိတ်ဖိစီးနေသလိုဖြစ်နေပါတယ် ကျနော်ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာညွှန်ပြပေးပါဆရာ ကျနော်တို့ဇနီးမောင်နှံ နောက်ထပ်ကလေး ရသလောက်လဲလိုချင်ပါတယ်
Ko Saw Mg says:
အမျိုးသမီး အင်္ဂါမှထွက်လာသော အရည်များကိုလက်ဖြင့်ထိမိပါက HIVရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ပါသလား။ လေးစားစွာဖြင့်
က​လေး အမွာ ​၂ ​ယောက်​ ​မွေးတာ ဘာ​ကြောင့်​လဲ
၁​ယောက်​ ​မွေးတာနဲ့ ဘယ်​လိုခြားနားမှုရှိလဲ
ကျား သုတ်​ရည်​ နဲ့ ဆိုင်​လား သိချင်​လို့ပါဆရာ.
ဆရာကြီးရှင့် သမီးရဲ့မောင်လေးမှာG6PT ရှိတယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောထားပါတယ် ဘယ်လိုဓါတ်မတည့်မှုမျိုးလဲရှင့်အသေးစိတ်သိချင်လို့ပါကျေှးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါ ကျေှးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ဆရာ ကျွန်​​တော်​ ကာမစိတ်​ကိုဘယ်​လို​ဖျောက်​ရမလဲခင်​ဗျာ စိတ်​ကအရမ်းအဆိုးကြီးမဟုတ်​​ပေမဲ့ လုံးဝဂွင်းမတိုက်​ချင်​​အောင်​ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲခင်​ဗျာ​ပြေကြား​ပေ​စေလိုပါတယ်​ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ခင်​ဗျာ တစ်​လမှာ​စေ်​ခါ​လောက်​​တော့ဂွင်းတိုက်​ဖြစ်​ပါတယ်​ဆရာ အဲ့လိုပြီးရင်​မျက်​နှာကဝက်​ခြံ​တွေအများကြီးထွက်​လာလို့ပါဆရာ လုံးဝအဲ့စိတ်​​ပျောက်​​အောင်​လုပ်​တဲ့နည်းများရှိပါသလားဆရာ ​ကျေးဇူးပါ superrookie2026 ပါဆရာခုနကမှားသွားလို့ပါ
hivနှင့်aids ဘာကွာလဲဆရာ?အိပ်နေရင်းသုပ်တွေထွက်တယ် ပြီးတော့မိန်းမနဲ့နေရင်ခဏလေးနဲ့ထွက်သွားတယ် အဲဒါဘာလို့လဲ
HIV ဟာရောဂါပိုးပါ။ AIDS ကရောဂါပါ။ ဆေးစားတယ်ဆိုတာက မိမိရဲ့  CD4နှင့်သာဆိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာ မကြာသေးဘူးဆိုတာကို သိထားရင် ဆေးသောက်စရာမလိုပဲ မိမိရဲ့ကိုယ်ခံအား မကျဆင်းအောင် အသွားအလာ အစားအသောက်အနေအထိုင် အိပ်ချိန် စတာတွေကိုဂရုစိုက်ရင် သက်တမ်းစေ့နီးပါးနေသွားနိူင်ပါတယ်။ HIV ပိုးဟာမိမိရဲ့ ကိုယ်ခံအား သွေးဖြူ ဥကိုနေ့ စဉ်နှင့်အမျှဖျက်ဆီးရန်အတွက် သွေးဖြူ ဥထဲမှာမျိုးပွားပါတယ်.။ ကူးစက်ခံရတာမကြာသေးလျှင် မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်နေထိုင်ရုံနှင့် အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့ သော်ပိုးများလာသည်ရှိသော် ARV (or) ART အခမဲ့ဆေးရရှိနိူင်သည့်ကျန်းမာရေးဌာနတွင် ရယူနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆရာ ကျွန်​​တော်​ ကာမစိတ်​ကိုဘယ်​လို​ဖျောက်​ရမလဲခင်​ဗျာ စိတ်​ကအရမ်းအဆိုးကြီးမဟုတ်​​ပေမဲ့ လုံးဝဂွင်းမတိုက်​ချင်​​အောင်​ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲခင်​ဗျာ​ပြေကြား​ပေ​စေလိုပါတယ်​ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ခင်​ဗျာ တစ်​လမှာ​စေ်​ခါ​လောက်​​တော့ဂွင်းတိုက်​ဖြစ်​ပါတယ်​ဆရာ အဲ့လိုပြီးရင်​မျက်​နှာကဝက်​ခြံ​တွေအများကြီးထွက်​လာလို့ပါဆရာ လုံးဝအဲ့စိတ်​​ပျောက်​​အောင်​လုပ်​တဲ့နည်းများရှိပါသလားဆရာ ​ကျေးဇူးပါ
အဲ့ဒါ အရမ်းကြီးစိတ်​ကြီးတာမျိုးမဟုတ်​ပဲ မိန်းက​လေး​တွေနဲ့ sexကိစ္စမှာ နည်းနည်းစိတ်​ဝင်​စားမှုရှိလာ​အောင်​ ဘယ်​လို​လေ့ကျင့်​ရမလဲ သိချင်​ပါတယ်​ခင်​ဗျာ
ဆရာကျွန်တော်အသက်က ၂၆ ပါ
ရိုသေစွာဖြင့် ဆရာ ကျွန်တော်မှာ မိန်းမရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က ကလေးမလိုသေးတာပါ ဒါကြောင့် အတူနေပြီးသွားရင် ဘာလိုလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ.......တစ်ခုလောက်ပါ ရာသီလာပြီးတော့ ၇ ရက်အကြာ အတူနေလိုက်မိပါတယ် အခုရာသီလာချိန်ရောက်ပါပြီ ဒါပေမဲ့ ရာသီမလာသေးပါ ကိုယ်ဝန်များရှိနေနိုင်မလား ဆရာ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် ဖြေပေးပါ ................
ဆရာ ထာဝရပျော်ရွင် ပါစေ
ဆရာ သမီးမှာချစ်သူရှိပါတယ်။လက်ထပ်ဖို့ထိ စီစဉ်ထားတာပါ။ သမီးချစ်သူက လိင်စိတ်နည်းနည်းထန်ပါတယ် ဆရာ။ သူကအလုပ်နဲ့အဝေးရောက်နေချိန်မှာ သူဟာသူ ဖြေနေရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ညကို ၃ ခါလောက်လုပ်နေပါတယ်။ သမီးစိုးရိမ်တာက လက်ထပ်တဲ့အခါ အဲလောက်ဖြစ်ပါမလားလို့ပါ။ သူအသက်က ၃၆ ပါ။ သူပန်းသေမှာ စိုးလို့ပါ။ဖြေပေးပါ ဆရာ။
အမျိုးသမီးတွေမှာကိုယ်ဝန်ရှိရင် ဆက်ဆံပြီး ဘယ်နှလ အကြာမှာအော့အန်တတ်ါပသလဲ
ဘာလို့ပြန်‌မ‌ဖြေတာလဲ log inပဲလုပ်‌ခိုင်း‌နေတယ်‌
အကာ အကွယ် မသုံးဘဲ
အရေးကြီးရ်ျ မြန်မြန် ပို့ပေးပါ။
လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ HIV/AIDS တို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို အဓိက ဖြေကြားပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်.။ မေးလာသူ အားလုံးကိုလည်း မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး ယဉ်ကျေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေ သုံးပေးပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်...
ဒေါက်တာ လိင်တံရှည်အောင်နဲ့ကြကီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျ အသက် က၂၇ရှိပါပြီ
ကျွန်တော်လည်း သုတ်လွှတ်မြန်တာ ဘာဆေးစားရမလဲ
ကိုယ်ဝန်ကို မလိုချင်လို့ ဖျက်ချချင်တာဘယ်မှာ အဆင်ပြေနိုင်ဆုံးဖြစ်မလဲမသိဘူး။။။။
ဆက်သွယ်လို့ရမယ် နေရာလေးရှိရင် ယခုလိပ်စာတိုင်း mail ပြန်ပို့ပေးပါနော်
လေးစွာဖြင့် Zin Yaw
ကိုယ်ဝန် မလိုချင်လို့ဖျက်ချချင်ရင်ဘယ်မှာ အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာ
ဆက်သွယ်ရမဲ့နေရာလေးသိရင် ယခုလိပ်စာကို mail အမြန်ဆုံးပို့ပေးပါရန်
အိမ်ထောင်မကြမှီလိင်ဆက်ဆံရင်အကျိုးအပြစ်ကို တဆိတ်မျှရှင်းပြစေလိုပါ တယ်အကာအကွယ်နဲ့သုံးတာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မျှတစေ လိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပါဆရာ့အမြင်လေးသိပါရစေ
ဆရာ ၁ လ သားကိုယ်ဝန်ကိုဘယ်လိုဘယ်နည်းနဲ့ ဖျက်ချနိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးရှိရင် ညွှန်ပြပေးစေလိုပါတယ် အရမ်းအရေးကြီးနေလို့ ပါ ဆေးရှိရင်လည်း ဘယ်ဆေးနဲ့ဘယ်မှာဝယ်လို့ ရနိုင်မလဲဆိုတာကိုပါ သိချင်ပါတယ် ဆရာ
မိန်းမတွေအမြန်ပြီးတဲ့နည်းလေးပို့ပေးပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ
ယောက်ျားလေးလိင်တံကိုကြီးအောင်နဲ့ရှည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆရာပြန်ကြားပေးနော် ချစ်သူကိုအပြည့်အ၀ခံစားစေချင်လို့ပါ ဆရာ
ဆရာရှင့် အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးသုးံပြီးလိင်ဆက်ဆံပြီးရင် နောက်၁ပတ်လောက်ကြာတောရာသီပြန်ပေါ်တယ် ။ကိုယ်ဝန်ရနိူင်ပါသလား။
မိန်းကလေးတွေ အပျိုစစ်တယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံရင် သွေးထွက်တယ်ဆို။ဖြေကြားပေးပါ။
ပေးထားတဲ့ လိပ်စာကို ကျနောတို့ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ပို့မရပါ။ လိပ်စာအမှန် ထည့်ပေးစေလိုပါသည်။ you@youdomain.com လို့ ပေးထားပါတယ်... အမှန်ပြန်ပေးစေလိုပါတယ်...
ကျန်တော်မေးချင်တာရှိပါတယ်။မိန်းကလေးတွေ ရာသီလာနေတဲ့အခါ ဆက်
ံမယ်ဆိုရင် ဘာတားဆေးမှ မရဘူးဆို။ဖြေကြားပေးပါ။ပိုင်သူ
ပေးထားတဲ့ လိပ်စာကို ကျနောတို့ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ပို့မရပါ။ လိပ်စာအမှန် ထည့်ပေးစေလိုပါသည်။
ကျွန်မမေးကြည်.ချင်တာလေးရှိလို.ပါ.ကျေးဇူးပြုပြီးအကြံပေးပါရှင်..ကျွန်မငယ်ငယ်ကရာသီသွေးမှန်ပါတယ်..အသက် ၂၆-၂၇ မှာရာသီလာတာမမှန်တော.ပါဘူး..ကျွန်မအမျိူးသားနဲ.တူတူနေရင်ရာသီမှန်မှန်လာတယ် ၁ လကို ၂ခါလောက်လာတယ်..သူနဲ.မနေတဲ.လတွေဆိုရာသီကမလာတော.ပြန်ဘူး..ပြီးခဲ.တဲ. aprilတုန်းကသူနဲ.တူတူနေဖြစ်တယ်..ဒါပေမဲ.နေတော.ကျွန်မ ရာသီသွေးလာတဲ.အချိန်ပေါ. သူ spermတော.ညီမထဲမှာပြီးတယ် ညီမမှာကိုယ်ဝန်ရမှာစိုးလို.တားဆေးရာသီလာလာမလာလာတားဆေးသောက်လေ.ရှိပါတယ်...သူနဲ.နေပြီးနောက်၁ ပတ်နေတော.ရာသီထပ်လာပါတယ်..အဲနောက်ပိုင်း၅လပိုင်းနဲ.ခု ၆လပိုင်းမှာမလာသေးဘူးရှင်. ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိတော.မစမ်းရသေးဘူး..ကိုယ်ဝန်များရှိနိုင်လား သို.ဘာကြောင်.ပါလဲ...ညီမစိုးရိမ်လို.ပါ..ကျေးဇူးပြူပြီးအကြံပေးပါနော်
puy soe oo says:
တာက အလိုမလိုက်သင့်ဘူး။ယောကျာင်္းဆိုတဲ့လူဟာ တကယ်ချစ်ရင် တန်ဖိုးထားတက်ကြတယ်။ဒါကတော့ လည်ဖျားမှုတစ်ခုပေါ့။
ဆရာရှင့် ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါနော်။သမီးရဲ့အသက်က၂၁နှစ်ပါဆရာ။သမီးမှာချစ်သူရှိပါတယ်။သူကသမီးကိုတောင်းပါတယ်သမီးစိက်ထဲမှာလဲသူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်စီးပေးချင်စိက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးကအရာရာကိုစိုးရိမ်စိက်ကြီးတော့သမီးအရမ်းကြောက်ပါတယ်။ပြီးတော့သမီးတို.၂ယောက်ကနောက်၅နှစ်လောက်ကြာမှလက်ထပ်ဖို.ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။အဲ့လောက်လက်ထပ်ဖို.အကြာကြီးလိုသေးတဲ့ချစ်သူ၂ဦးကနေသင့်ပါမလားဆရာ။ပြီးတော့အဲ့လိုနေလိုက်ပြီးရင်သမီးရဲ့ကိုယ်ခနာကအပျိုမစစ်တော့ဖူးဆိုပြီးသိသိသာသာထင်ရှားသွားနိုင်ပါလားဆရာ။ဆရာရဲ့ဖြေကြားချက်သမီးစောင့်နေပါ့မယ်။လိုက်လဲလိုက်နာပါ့မယ်ဆရာ
မိန်းကလေးအ နေ နဲ့ကိုယ် ရဲ့ခင် ပွန်းဖြစ် လာ မယ့် သူ ကို ဆန္ဒ ဖြည့်ပေးချင် တာ ကို နားလည် ပါ တယ် . သို့သော် စဉ်းစားစ ရာ က ၅ နှစ် ဆို တဲ့ အ ချိန် က အ ရာ အားလုံးပြောင်းလဲ သွားနိူင် ဖို့လောက် ပါ တယ် . ဒါ ကြောင့် သူ့ကို တ ကယ်ချစ် တယ် ဆို ရင် တော့ ဖြင့် လက် ထပ် ပြီးနောက် မှာ သာ ဖြည့်ဆည်းမယ် ဆို ရင် မိတ် ဆွေ ကို သူ ပို လေးစားပါ လိမ့်မယ် . အဲဒီ ကိစ္စ က အ ရမ်းတန် ဖိုးရှိ တဲ့ လက် ဆောင် တစ် ခု နဲ့တူ ပါ တယ် . ဒါ ကြောင့်လွယ် လွယ် ပေးမိ မယ် ဆို ရင် နောင် ပိုင်းနောင် တ ကို ပဲ ရိတ်သိမ်းဖို့ရာ များပါ တယ် . အကြံ ပေးတာ ပါ ဗျာ .. ဆုံး ဖြတ် ချက် ကို တော့ မိတ် ဆွေ ပဲ ပိုင် ပါ တယ် .. 🙂
ဆရာ မေးခွန်းတွေ ကိုပြန်ဖြေပေးပါ..........ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆရာ ခင်ဗျကျွန်တော်ညအိပ်ရင် တစ်လကိုနှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက် သုတ်ထွက်ပါတယ် အဲလိုထွက်တာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ ဘာကြောင့်အဲလိုထွက်တာရယ် မထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သေချာရှင်းပြအေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျ ကျွန်တော်အသက်က ၂၀ဘဲရှိပါသေးတယ်
ဆရာခင်ဗျ ကျွန်တော်အိပ်ရင် တစ်လကို နှစ်ခါ သုံးခါလောက် သုတ်ထွတ်ပါတယ် အဲလိုထွက်တာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ ဘာကြောင့် အဲလိုထွကိတာရယ် မထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သေချာရှင်ပြပေးပါ ခင်ဗျ ကျွန်တော်အသက်က ၂၁ ရှိပါပြီ
ဆရာ ခင်ဗျာ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ ဘယ်လို သိနိုင်ပါသလဲ။ ဘယ်နှစ်ရက်လောက်နေမှ သိရတာပါလဲ။ ကျွန်တော့ အမျိူးသမီးက ဆက်ဆံပြီးနောက်နေ့ကျတော့ ဗိုက်ထဲမှာ နေရခက်နေတယ်ပြောလို့ပါ။ အရင်ကဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
ကျနောသိချင်တာ သုတ်လွတ်မြန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ
ကျန်တော် အသက်က 17 နှက်ရှိပြီ။ကျန်တော် သိချင်တာရှိပါတယ်။မိန်းကလေးတေက ကောင်လေးတေထက် အရင်ပြီးပါသလား။ဖြေပေးပါ။
ဆရာ ခင်ဗျကျွန်တော်မှာသုတ်လွတ်မြန်နေပါတယ် နောက်ပြီးညအိပ်ယာဝင်ရင်တလကို နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက်ထွတ်ပါတယ် မထွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဖြေပေးစေချင်ပါခင်ဗျ ကျွန်တော်အသက်က ၂၀ ဘဲရှိပါသေးတယ်
ဆရာ ရှင်းပြထားတဲ.အတိုင်း ကလေးရမယ်. ၂ပတ်အတွင်း ၊ရက်ဆက် ၁၄ရက်လုံးလုံး နေ.တိုင်း တစ်ကြိမ်ဆီ အတူတူနေမှ ကလေးရဖို. သေချာနိုင်လား ဆရာ။ ကလေးယူဖို. ကြိုးစားနေတာ ၂လ၇ှိပေမယ်. မရသေးတဲ.အတွက်၊ ကလေး၇ဖို. ဘယ်နှစ်ရက် အတူတူ ဆက်ဆံရင် လုံလောက်မလဲ သိချင်လို.ပါ။ ကိုယ်ဝန် လွယ်ကူစွာရစေမယ်. နည်းလမ်းကို ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
အထက်ပါ Reply များကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
မေးလာတဲ့ comment များကို ထည့်ပေးလာတဲ့ အီးမေး လိပ်စာနဲ့ တိုက်ရိုက် ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါတယ်... comment ဖြင့် ဖြေကြားခြင်း မဟုတ်တဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်..
ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်နိူင်ပါသလားခင်ဗျ ။ မည်သည့်သန္ဓေတားဆေးမှလည်းမသောက်ထားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ရက်ရှောင်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ၉ရက်နေ့ ပုံမှန်သွေးပေါ်ပါတယ်။တခါတရံမှသာလျှင် တစ်ရက်နောက်ကျ တစ်ရက်စော
ဒီလောက်သာဖြစ်တာပါခင်ဗျ။ အဲ့ဒါ ရာသီသွေးပေါ်ရန် ၄ရက်လောက်အလိုတွင် အတူတူနေခဲ့မိပါတယ်။ သို့ သော်ယခု ၉ရက်နေ့တွင် သွေးပေါ်ရမည်မှာမပေါ်သေးပဲ တစ်ရက်စွန်းနေပါပြီခင်ဗျ။ အဲ့ဒါကိုယ်ဝန်ရှိမဲ့လက္ခဏာဟုတ်သည်၊ မဟုတ်သည်ကို သိချင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ..။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ email လိပ်စာထဲကိုဖြေကြားပေးပါလားခင်ဗျာ...။anerky07@gmail.com
ွှThet naing says:
ဆရာ ကျွန်တော်က sexy စိတ်အရမ်း ပြင်းပြပါတယ်။ ကျွန်တော်က လူပျိုပါ။ လူပျို ပဲ့ ဖြစ်နေလို့လား မသိဘူး sexy စိတ် ပြင်းတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်ပူတာက အိမ်ထောင်ကျရင် အိမ်ထောင်ရက်သား ကြာလာလျှင် ထိခိုက်နိုင်လား။ ပြီးတော့ အခု ဖြစ်နေတဲ့ sexy စိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းရှိလား ခင်ဗျား။ ခွင့်လွတ်ပါ ဆရာ။ မီသားစု ကလွဲရင် အရွယ်ရှိသူ အားလုံးကို ဒီစိတ်နဲ့ပဲ မြင်နေမိတယ်။ ၄၅ နှစ်အပေါ် တော့မပါ ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီစိတ်ကို ရသလောက် ထိမ်းချင်တယ်ဆရာ။ကျေးဇူးပြု၍ လမ်းညွန်ပေးပါရန်
သုတ်လွတ်မြန်တဲ့ အကိုတွေ တစ်ခုလောက်အကြံပြုချင်ပါတယ်
ကိုယ်တိုင် စိတ်မထိန်းနိုင်လို့လက်နဲ့ အာသာဖြေတဲ့ အခါမျိုးမှာပေါ့
ပြီးခါနီးလို့ တင်းလာတော့မယ်ဆိုရင် ရပ်လိုက်ပါ စိတ်ကို တစ်နေရာ လွင့်လိုက်ပါ အဲအပေါ်မှာ အာရုံမရောက်စေပါနြ့ ပြီး၇င် ပြန်လုပ်ပါ အဲလို လေ့ကျင့်ပေးရင် သုတ်ထိန်းနိုင်ပါတယ် စစလုပ်ချင်းမှာတော့ ခံရခက်ပါမယ် ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ပြီးချင်လို့ လုပ်တာ မပြီးအောင်နေရမယ်ဆိုတော့ စိတ်တော့အောင့်သက်သက်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် တကယ်ကောင်းတဲ့ နည်းပါ ဘာဥပါဒ်မှလည်းမဖြစ်ပါဘူး
တကယ်လို့ ဆေးနဲ့ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်နည်းပေးပါမယ်
လုပ်ချင်လုပ်ပါ နောက်မှအပြစ်တော့မတင်ပါနဲ့ 
ခွေးလှေးယားသီးအစေ့ နေပူလှန်းအခြောက်ခံထားပြီး ကြက်သွန်ဥဖြူ တစ်လုံးဥနဲ့ ဆတူရောထောင်းပါ စေးကပ်နေအောင်ထောင်းပါ ပြီးရင် ပြားရည်လေးနဲ့ ရောကာ လက်သန်းလုံးလောက်လေးလုံးပြီးနေပူလှန်းပါ ခြောက်သွေ့ ရင်တော့ အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ ၃လုံးထက်ပိုမစားလေကောင်းလေပါဗျာ အားလုံးခင်မင်လျက် ခင်မင်သူ
ဆရာကျွန်တော် သုတ်လွတ်တာမြန်နေပါတယ် လိင်စိတ်နိုးကြွရင် သူတ်လွတ်တာ ခဏလေးပါ မိန်းကလေနဲ့လိင်ဆက်ဆံရင် သူတ်လွတ်မြန်နေတယ် ဆရာ
သမီး..သွေးမဆင်းလို့ ဆီးစစ်တံနဲ့ စစ်ကြည့်ပါတယ်..
ကလေးနုသေးလို့ လို့.ပြောကြပါတယ်...ဆိုင်ပါသလားရှင်..
အခုလိုစရှိတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အတူနေလို့ရပါ့မလားဆရာ..
မလုပ်မိချင်လို့ေ၇ှာင်ရမယ့်အချက်နဲ့ ရှောင်ရမယ့်အစာလေးတွေကို
ဆရာခင်ဗျာ ကျွှန်တော်ကတော့ စစ်ကိုင်ကပါ ဆရာပြောတာတကယ်လားခင်ဗျာ တကယ်ဆိုရင်မေးလေးတောပြန်ပုံပေးပါ ကျွှန်တော်မှားသမီးတယောက်၇ှိပါတယ်နောက်ထက်သားတယောက်လောက်လိုချင်ပါတယ်ရမလားခင်ဗျာကျွှန်တော်ရအောင်လို့နေတိုင်း sexy စွဲပါတယ်ခုချိန်ထိနောက်ထပ်ပြသနာကကလေးတယောက်မရသေးပါဘူးကျွှန်တော်လည်ူးအားတွေကုန်လှပါပြီဗျာ..........ဆရာသိရင်ကျွှန်တော်ကိနည်းလမ်းပေးပါအုံး...............
ဆရာခင်ဗျကျွန်တော်မှာ သုတ်လွှတ်မြန်နေပါတယ်..နောက်ပီးတော့ ညအိပ်နေရင်းလဲအလိုလိုထွက်ပါတယ်ဆရာ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုတာပြောပေးပါအုံး ကျွန်တော့်အသက်က22 ပါဆရာညအိပ်၇င်းထွက်တယ်ဆိုတာလဲ 1 လကို 2ခါလောက်ပါ.....ကျေးဇူးပြုပီးဖြေပေးပါနော်.....
ကျမ ယူမည့်ယောက်ကျားနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လ လောက်က ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပြီး ကလေး မယူသေးချင်တာနဲ့ ဖျက်ချခဲ့ပါပြီ
ယခုတဖန် ရာသီလာချိန်ကျော်သွားပြီး ရာသီမလာဖြစ်နေလို့ နောက်ကိုယ်ဝန် ရှိလာလို့ သားဖျက်ချခဲ့ရင် အန္တရယ်များ ရှိပါသလား ရှင့်။
ကျွန်တော်သည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်ပါ ... အိမ်ထောက်ကျတာ 3နှစ်လောက် ဖြစ်နေပါပြီ ဆရာ။ ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး စ အချိန် ကျွန့်တော့ မိန်းမက ခလေး မယူချင်သေးဆိုပြီး တာဆေး 2ကဒ်လောက် သောက်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။အခု ကလေး လိုချင်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဆေးခန်းလဲသွားပြ ပါတယ်။ကျွန်တော့်မှာလဲ အားနည်းချက်တွေ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ မိန်းမရဲ့ သားအိမ်ပေါက် ပိတ်နေသလား ဆိုပြီး မိန်းမရဲ့ သားအိမ်ကိုလဲ ဖွင့်ပြီးပါပြီ။ဆေးခန်းသွားပြတာလဲ 1နှစ် ကျော်သွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားမလားပါဘူး ဆရာ။အတူနေပြီးရင်မိန်းမ အင်္ဂါကနေသုတ်ပြန်ထွက်တတ်ပါတယ်ဆရာ ... အဲဒါကြောင့် ကလေး မရတာလား လို့ သိချင်ပါတယ် ဆရာ။ ပြီးတော့ အခု ကျွန်တော့ မိန်းမ သားအိမ် အားဆေး ဆိုပြီး တမျိုး သောက်နေပါတယ် အဲဒီဆေးကို ကလေးမရတဲ့အထိ သောက်ရင် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနှိင်မလား ဆရာ။ ဆရာ ကျေးဇူးပြုပီး ကျွန်တော့ကို ကလေး ရအောင် နည်းလမ်းတွေ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာ ။
ပေးထားတဲ့ အီးမေး လိပ်စာကို ကျနောတို့ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ပို့မရပါ။ လိပ်စာအမှန် ထည့်ပေးစေလိုပါသည်။